Iran: Eo An-dalana Ny Fanomanana Ny Fihetsiketsehana Andron’ny Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2017 15:53 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Hokarakaraina amin'ny 7 Desambra manerana izao tontolo izao ny fihetsiketsehana “Andron'ny Mpianatra” [16 Azar] ao Iran izay manohitra ny famoretana mpianatra ao Iran. Tamin'ny taona lasa, an'arivony ireo mpanao fihetsiketsehana nanohitra ny fitondrana Islamika tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana nandritra ny Andron'ny Mpianatra, ary nihiaka teny filamatra nanohitra an'i Ali Khamenei, mpitarika ny Repoblika Islamika, sy nanohitra ny politikan'ny raharaham-bahinin'ny governemanta. Nihiaka ihany koa izy ireo hoe “Aiza ny safidiko?”.
Antso maitso avy ao Londra
Nandefa mailaka faobe sy nanasa ireo mponin'i Londra ny London Green Movement:
16 Azar dia noheverina hatrany ho mariky ny fihetsiketsehan'ny mpianatra Iraniana miady amin'ny didy jadona sy mitaky ny demaokrasia sy ny fahalalahana hatramin'ny taona 1953, na izany aza, nisy ny ezaka famoretana rehetra nataon'ny mpanao didy jadona, na dia tsy nahomby aza, mba hampanginana ny feon'ny mpianatra! Hiverina hiaraka amin'ireo mpianatra Iraniana indray isika amin'ny adin'izy ireo ho amin'ny demaokrasia sy ny fahalalahana, hahatsiaro ireo fanahy be herim-po izay nijoro hiaro ny zon'izy ireo sy nanohitra ny famoretana mahery vaika sy ny tsy refesi-mandidin'ny IRI, tahaka an'i Majid Tavakoli sy ireo mpianatra 70 mahery izay nogadraina hatramin'izay ary ireo maro hafa izay voaroaka tany amin'ny oniversite manerana an'i Iran noho ny nampiharan-dry zareo ny zon'izy ireo amin'ny fahalalahana miteny sy ny fivoriana!
Nisy ihany koa ny lahatsary Youtube nalefa tamin'izany ahitana andian-tsary avy amin'ny hetsi-panoherana Iraniana.
Hetsi-panoherana ny seza foana
Politicsofresistance any Holandy nanoratra hoe:
Ho setrin'ny fanorisorenana maharitra ataon'ny mpianatra Iraniana, nanao fihetsiketseham-panoherana seza foana izahay tao amin'ny Akademia Rietveld miompana amin'ny zavakanto sy ny haibika tao Amsterdam. Hiditra ao amin'ny trano ireo mpianatra ary hahita kilasy iray foana tsy misy olona ny seza. Ny sasany amin'izy ireo dia mamaky vaovao ary manohy ny asany. Ny hafa koa dia mipetraka ary manoratra zavatra ho an'ny mpianatra ao Iran. Ho alefa any amin'ny vitsivitsy amin'izy ireo na ny fianakaviany ireo hafatra ireo .
Namoaka sary maromaro (eo ambony ny iray) ihany koa ity tranonkala ity ary nilaza hoe:
Mpianatra manodidina ny 100 no migadra amin'izao fotoana izao. Maherin'ny 100 no voaraoka ary isa tsy tambo isaina no voaràra tsy afaka mianatra any amin'ny oniversite ao IRAN intsony.
Velona ny Oniversite
Abai, bilaogera Iraniana nilaza fa ny drafitra amin'ny faha-16 Azar dia mampiseho fa mbola velona ny oniversite na dia eo aza ny ratra rehetra amin'ny vatany. Nanonona ny anaran'ireo bilaogera nogadraina sy nenjehina maromaro, tahaka an'i Majid Tavakoli ihany koa izy.
Tao amin'ny YouTube, lahatsary iray hafa milaza fa maneho ny fivorimborian'ireo mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tehran mihiaka hoe “Miala ny mpanao didy jadona” tamin'ny 6 Desambra.